विद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धा छ र हुनुपनि पर्छः मास्के - Sindhuli Saugat
विद्यालयहरुमा प्रतिस्पर्धा छ र हुनुपनि पर्छः मास्के
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७५ वैशाख १० गते सोमवार काठमाडौं
विगत लामो समयदेखि सिन्धुलीको शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध रहेका राजेश मास्केले विगत एक दशक अघिबाट शिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालयमा प्रध्यानाध्यापकका रुपमा सेवा गर्दै आएका छन् । जिल्लाका पुराना शिक्षकमा गन्निे मास्केले विगत र अहिलेको शिक्षा अवस्थाको बारेमा थुप्रै भिन्नता देखेका छन् । सिन्धुलीको कनपा–६, माझिटारमा रहेको शिद्धबाबा विद्यालयका प्रधानाध्यापक मास्केको विद्यालयमा करिब ५ सय बढि विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभएर उनले जिल्लामा संचालन भएका नृत्य, गायन लगायतका कार्यक्रमहरुमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । आफ्नो विद्यालयमा अध्ययनरत अपांग, जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीहरुलाई उनले निशुल्क अध्ययन गराइरहेका छन् । त्यसैगरि, समाजिक कार्यमा पनि उनी सामेल भएका छन् । उनको अनुभवका आधारमा उनीसँग सिन्धुली जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तन लगायत उनी प्रधानाध्यापक रहेको विद्यालयको बारेमा सिन्धुली सौगातका सह–सम्पादक सगुन रायमाझीले लिएको अन्तवार्ताः
लामो सयम शिक्षाको क्षेत्रमा लाग्नुभयो, सिन्धुली जिल्लामा विगत र अहिले शिक्षा क्षेत्रमा के फरक पाउनु भएको छ ?
विगत र वर्तमानलाई नियाल्दा निकै नै परिवर्तन मैले पाएको छु । विगतको तुलनामा विद्यालय संचालन पद्धति, शिक्षण पद्धति आदिमा नविनताका साथै सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक शैक्षिक विधि अपनाइएकाले गर्दा शैक्षिक उपलब्धी विगतको तुलनामा निकै नै राम्रो छ । तुलनात्मक रुपमा बोर्ड परीक्षाहरुमा पनि राम्रो नतिजा समग्र सिन्धुली जिल्लाले पाउन थालेको छ, जसलाई मैले वर्तमानको उपलब्धीका रुपमा लिएको छु ।
सिन्धुली जिल्लामा निजी विद्यालयहरुको प्रतिस्पर्धा अत्याधिक छ भनिन्छ नि ? त्यस्ले तपाईँको विद्यालयलाई व्यवसायिक रुपमा कतिको असर पारेको छ ?
बिल्कुलै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुभयो । जिल्लामा संचालित निजी विद्यालयहरुका बिचमा आफ्नो लोकप्रियताका लागि प्रतिस्पर्धा छ र हुनुपनि पर्छ । प्रतिस्पर्धाका कारण नै उत्कृष्ट सिकाइ उपलब्धी हासिल हुन्छ । यदि प्रतिस्पर्धा नहुने हो भने अभिभावकहरुले सोचे अनुसार र विद्यार्थीवर्गले मपेक्षा गरेअनुसार सिकाइ उपलब्धी हायिसल नहुन सक्छ । तसर्थ, राम्रो र गुणस्तरयुक्त सिकाइ उपलब्धी हासिल गर्न पनि प्रतिस्पर्धा हुन जरुरी छ र व्यवसायिक रुपमा पनि हाम्रो विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धाले असर गरेको छ, जसका कारण विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरदेखि लिएर खेल मैदान, छात्रावास (होस्टेल) र भौतिक संरचनाहरु पनि अन्यको तुलनामा उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ ।
अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिका व्यवहारीक शिक्षाबाट वञ्चित भएको भन्ने गुनासो छ नि ?
विगतमा थिए होलान् तर वर्तमानमा यो छैन । हुन त नेपालको शैक्षिक प्रणालि पनि व्यवहारिक भन्दा बढी सैद्धान्तिक नै रहेको छ तर यसलाई हामीले वर्तमानमा प्रविधिको प्रयोगद्धारा सैद्धान्तिकलाई पनि व्यवहारिक ढंगले विद्यार्थीहरुमा ज्ञान हासिल गराउन श्रव्य–दृश्य सामग्रीलाई कक्षाकोठामा प्रस्तुत गर्ने, कम्प्युटरका साथै विज्ञान प्रयोगशाला कक्षको व्यवस्था गरेर र शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई त्यसनुसारका तालिममा सहभागी गराएर हामीले व्यवहारिक ज्ञान मै बढी भन्दा बढी महत्व दिँदै आएका छौ ।
शिद्धबाबा विद्यालय र जिल्लाका अरु विद्यालयमा के भिन्नता छ ?
जिल्लाका अन्य विद्यालयका तुलनामा शिद्धबाबा विद्यालय निकै फरक छ । सिन्धुली जिल्लमै पहिलो सुविधा सम्पन्न भूकम्पप्रतिरोधात्मक भवन, सबै खाले प्रद्षणबाट मुक्त, शान्त तथा भयरहित बालमैत्री वातावरण रहेको छ । अरु विद्यालयका तुलनामा संस्कार सहितको शैक्षिक गुणस्तरमा अब्बल रहेको कुरा विगतको नतिजाले प्रमाणित गरिसकेको छ । साथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा पनि जिल्लामा उतकृक्ष्ता हासिल गदैृ आएको छ । शिक्षकशिक्षिकहरु पनि दक्ष, अनुभवी र सुक्षम भएकाले शिक्षण सिकाइ पनि प्रभावकारी हुनुका साथै विद्यार्थी भाइबहिनिहरु पनि लगनशील र अनुशासित छन् । यी कुराहरु नै शिद्धबाबालाई फरक तुल्याउने विषयहर हुन् ।
विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा कतिको आबद्ध गराउनुहुन्छ ?
विद्यार्थीहरुलाई उनीहरुको रुची, चाहना र इच्छानुसारका विधि (नृत्य, गायन, खेलकुद) क्रियाकलापमा सहभागी गराइदैँ आइएको छ । जसको कारण जिललामा अतिरिक्त क्रियाकलाममा हाम्रो विद्यालय अब्बल रहँदै आएको छ र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यसलाई अझ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउदै लैजाने योजना पनि तय भइसकेको छ ।
अभिभावकहरुलाई केहि भन्न चाहानुहुन्छ ?
अभिभावहरुको साथ, सहयोग र माया पाएर नै यस शिद्धबाबा विद्यालय वर्तमानको अवस्थामा आइपुगेको हो र अझै पनि अभिभावक ज्यूहरुबाट आगामी दिनहरुमा पनि यसरी नै साथ, सहयोग, रचनात्मक सल्लाह र सुझाब रहिरहने छ भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।
अन्त्यमा, जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रलाई अझैँ विकसित गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
सिन्धुली जिल्लाको शैक्षिक सुधारका लागि स्थानिय सोच, जनसहभागिता र स्थानिय सरकारको भूमिका पनि आवश्यक देखिन्छ । अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाई स्थानिय सरकारले कार्य गर्ने हो भने शैषिक क्षेत्रमा सिन्धुली जिल्ला नेपालकै नमुना बन्न सक्छ । साथै सीप सम्बद्ध शिक्षा आजको प्रमुख आवश्यकता भएकाले प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिरक सिकाइमा समय खर्चनुपर्छ ।
अन्त्यमा, यस पत्रिकामार्फछ आफ्नो विचार राख्न दिनुभएकोमा तपाईहरु सम्पूर्णमा विशेष धन्यवादका साथै सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । धन्यवाद !
पछिल्लाे - सिन्धुलीमा भूकम्प पछिको पुनःनिर्माणले तिव्रता लियो
अघिल्लाे - अपराधिलाई पार्टीमा नराख